नेकपा (एमाले) कैलालीमा समानान्तर जिल्ला कमिटी - Lekhapadhi राजनीति : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
नेकपा (एमाले) कैलालीमा समानान्तर जिल्ला कमिटी
लेखक : लेखापढी ३० चैत्र २०७७, सोमबार २३:३४ मा प्रकाशित
कैलाली । ३० चैत
नेकपा (एमाले) भित्र समानान्तर कमिटी बनाउने क्रम केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विस्तारित भएको छ । यसै क्रममा कैलाली जिल्लामा पनि माधव नेपाल पक्षले समानान्तर जिल्ला कमिटी निर्माण गरेको छ । धनगढीमा कैलाली जिल्ला स्तरिय विस्तारित बैठकको आयोजना गरी दिर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी विस्तार गरिएको हो । वि.स. २०७५ जेठ २ गतेको नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटीको बैठकबाट गठित कमिटीलाई सक्रिय बनाएर पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन गरिएको छ ।
नवगठित कमिटीका सचिव विमल जोशीका अनुसार चार जना उपाध्यक्ष, एक सचिव र ९ सहसचिव सहित एक सय पचहत्तर जनाको जिल्ला कमिटी बनाइएको छ । समानान्तर कमिटीको उपाध्यक्षमा कर्ण जैसी, भैरव रावल, केवालाल चौधरी र कलावती जोशी चयन भएका छन् । सचिवमा विमल जोशी र उपसचिवमा शिवराज बिनाडी, प्रेम चौधरी, चुनकुमारी चौधरी, लोकेन्द्र शाही, सूर्यचन्द्र भट्टराई, लोकबहादुर सारु, दिलबहादुर विक, खडक रावल र बखत बिष्ट चयन भएका छन् ।
यस जिल्ला भेलामा नेकपा (एमाले) का नेता डा. भीम रावल, केन्द्रीय सदस्य गरिमा शाह, झपट रावल लगायतका अतिथि सहभागी थिए । कार्यक्रममा नेता डा. रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देश र पार्टी नै संकटमा परेको बताए । उनले वर्तमान अन्यौललाई चिर्न र ओलीको गलत कामको विरोध गर्न सबैले लाग्नुपर्ने बताए ।